Xashiishadda Caafimaadka Waxaa U Tixgeliya Haween Badan Inay Badal U Tahay Dawooyinka • Dawooyinka Inc.eu
Arbacada, June 29 | 2022
Isku-dhafka Ruuxa Hindida (dhirta): Jirka iyo Maskaxda
Bogga ugu weyn cannabis Xashiishadda daawada ah ayaa haween badan iyo in ka badanba u arkaan bedelka daawada
Xashiishadda daawada ah ayaa haween badan iyo in ka badanba u arkaan bedelka daawada
albaabka daroogada December 8 2020
maqaal by daroogada December 8 2020
Marka laga hadlayo sida Mareykanku ula dhaqmaan dhibaatooyinkooda caafimaad ee kala duwan, inbadan oo iyaga ka mid ah ayaa hadda raadinaya xashiishad caafimaad oo ku taal gobolada ay sharci ka tahay. Cabsida qabatinka opioid-ka, xad-dhaafka dilaaga ah, iyo hoos-u-dhaca kale ee dawooyinka dhakhtarku qoro ayaa, macno ahaan, dhiirrigelisay baadigoobka daroogada aaminka ah.
1 Dumarku waxay u badan tahay inay ku beddelaan daawooyinka xashiishka daawada marka loo eego ragga
2 Dumarku waxay isticmaalaan xashiish daawo ah si looga yareeyo xanuunka daba dheeraada
Sida laga soo xigtay dhawaan cilmi baaris ku samaysay Jariidada Caafimaadka Haweenka si kastaba ha noqotee, waa haweenka kuwa hogaaminaya tan.
In kasta oo marijuana ay mar uun sir weyn ka dhigtay kuwii isticmaalay, haddana waqtiyadii way is beddeleen. In kabadan kalabar dalka hadda wuxuu leeyahay sharciyo buugaagta u oggolaanaya ujeedo daaweyn. Iyo dhammaan cilmi baarista soo shaac baxday sanadihii la soo dhaafay taasoo muujineysa sida xashiishka caafimaad uu u noqon karo beddel lagu beddeli karo opioids iyo benzodiazepines, in badan oo dadka ka mid ah ayaa xiiseynaya xashiishadda.
Daraasaddii ugu dambaysay, oo ay ka qayb qaadatay dhakhaatiir iyo bukaanno badan, ayaa muujisay in qayb aad u tiro badan oo dadweynaha ah ay ku boodeen gaariga xashiishka ee caafimaadka. Mana ahan kaliya maxaa yeelay waa moodada. Dadku waxay doortaan tan si ay isaga difaacaan dhicitaanka dawada ee maanta aad u baahsan. Mareykanku sifiican ayey uga warqabaan in tobanaan kun oo dad ah ay u dhintaan daroogada loo qoro sanad walba, wayna diidan yihiin inay ka mid noqdaan tirakoobkan.
Dumarku waxay u badan tahay inay ku beddelaan daawooyinka xashiishka daawada marka loo eego ragga
Si xiiso leh oo ku filan, cilmi baarayaashu waxay heleen taas haweenka ka dhakhso badan ragga si loogu beddelo marijuana-da dawooyinka xanuunka baabi'iya iyo dawooyinka kale ee dhakhtar qoro, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in ragga guud ahaan ay khibrad badan u leeyihiin xashiishka.
Dumarku waxay u badan tahay inay ku beddelaan daawooyinka xashiish daawo ah marka loo eego ragga (afb)
Inta badan haweenkan xashiishka doonaya waxay u isticmaalaan xashiishka xannuun joojinta, ayay leeyihiin baarayaashu. Daraasaduhu waxay muujiyeen in xashiishadda caafimaadku ay daawo wax ku ool ah u noqon karto xaaladaha xanuunka ee fudud ama kuwa dhexdhexaadka ah iyo beddel ammaan ah oo loogu talagalay daawooyinka la iska iibsado iyo kuwa dhakhtar qoro labadaba.
Dumarku waxay isticmaalaan xashiish daawo ah si looga yareeyo xanuunka daba dheeraada
Maqaal by Forbes waxay soo jeedineysaa inay isticmaalaan xashiish daawo ah si loo yareeyo xanuunka miskaha ee daba dheeraada, oo badanaa keena "PMS iyo PMDD, endometriosis iyo qaar ka mid ah kansarka ku dhaca haweenka."
Ma ahan wax la yaab leh in haween ka badan ragga ay doorbidaan xashiishka caafimaadka si loogu beddelo daawooyinka loo qoro. Waxay u badan yihiin noocyada caqliga badan. Si kastaba ha noqotee, daraasaddu waxay soo jeedineysaa in si loo ogaado sababta ay haweenku ugu beddelayaan marijuana caafimaad ay u baahan karaan daraasado dheeraad ah.
Macnaha ay haweenku u fahmi karaan xashiishadda caafimaad inay tahay kaabis ama daaweyn kale ayaa mudan in baaritaan dheeri ah lagu sameeyo, maadaama baadhitaankan loo arki karo natiijada bukaan-socodka ee khibradda ay u leeyihiin xashiishadda, oo aan lagu beddelin oo keliya in la beddelo aragtida dadweynaha ee ku saabsan arrintaas, ayay qoreen. qorayaasha daraasadda.
Waxaa suurtagal ah in dowladda soo socota ee Biden ay tallaabo ka qaadi doonto sanadka 2021-ka si ay sharci uga dhigto marijuana caafimaad oo dalka oo dhan ah - ama ugu yaraan dib loo dhigo si cilmi-baaris dheeri ah loo sameeyo.
Ilaha waxaa ka mid ah CannabisHealthNews (EN), Forbes (EN), TheFreshToast (EN)
cannabiscaafimaad lehcaafimaadkadaawodaawo cannabisdaawada cawskahaweenka
Senator-ka reer Colombia wuxuu doonayaa inuu sharciyeeyo maandooriyaha loo yaqaan 'cocaine'
Hindise sharciyeedka ku saabsan xakamaynta xashiishadda oo ay meel mariyeen Aqalka Wakiilada Mareykanka
CBD waxay u keeni kartaa suuxdin dadka iyo…
Thailand waxay sharciyeysay ka ganacsiga xashiishadda, laakiin wali waxay mamnuucday madadaalo…
Wasaaradda waxbarashada ee Thailand waxay doonaysaa inay samayso aagag ka caagan xashiishadda
Sidee saliid CBD u fiican tahay?
Sidee xashiishadda kaa caawin kartaa inaad la qabsato...
Microdosing leh marijuana: 3 faa'iidooyin iyo 5...
28 Oktoobar 2019